Tilmaanta-tallaabo-Tallaabo Qoddobka Qoditaanka-Ellicott Dredges Blog
Waxyaabaha Macdanta DuPont - Habka Macdanta Dredge
Macdanta culus ee macdanta waxay ka kooban tahay dhowr marxalado shaqsiyeed ama isku xigxiga hawlgalka. Marxaladan waxaa lagu sharxay hoosta sida ay u kala horreeyaan.
Bilowgii, dhammaan alwaaxyada suuq geynaya ayaa laga goostaa isla goobta macdanta laga helo. Qashin-qubka, gogosha iyo burush haray ayaa markaa soo uruurinaya oo jeexjeexaya tra tralerler. Maaddadan waxaa loo oggol yahay inay qalajiso oo mar dambe la gubo.
Topsoil ka dib waxaa loo saarayaa qoto dheer oo ah 6-8 gudaha ama midkoodba waxaa loo keydiyaa kaydinta gadaal ama waxaa toos loogu dhajiyaa jaridda macdanta agtaada ah. Shaqadan waxaa lagu fuliyaa qalabka loo yaqaan 'scroper pan' 23-yd3 afar-wheel-drive pan scraper.
Sunta macdanta waxaa lagu qodaa weel loo yaqaan 'Ellicott® astaan ​​nuugid ah oo ku qalabeysan weji goon. (fiiri sawirka) Qulqulka biyuhu wuxuu leeyahay laba faallood oo ku yaal gadaasha gadaal, kuwaas oo loo isticmaalo pilot ahaan iyadoo la raacayo khadadka si looga gudbo ama dib loogu noqdo qulqulka. A 20-in bamgareer dareere ah ayaa lagu sii daayaa tuubbooyinka 22-ee qaybaha 40-ft ee lagu taageeray pontoons. Kuwani waxay ku xiraan qulqulka mashiinka qoyan ee sabeeya.
Mashiinka qoyan waxaa lagu dhisay dhowr weel oo sabayn ah. Qulqulka ka soo baxa dheecaanka qulqulaya wuxuu ku socdaa shaashad gariir ah oo leh furitaanno 0.25-ah. Xajmidu waxay ku dhacdaa culeyska xabbad dhagaxleyda ah halkaas oo ay ku soo jabto jajab adag. Dheecaanka ka soo baxa birta xamaasada ayaa ku qulqulaya culeys shaashad ah oo leh shaashad leh furitaanno 1-in ah. + 1-in oversize wuxuu ka kooban yahay asal ahaan xididdada, kuwaas oo si toos ah loogu sii daayo balli-biyoodka. Qalabka taranka ayaa dib loogu tuuraa shaashadda.
Mashiinka qoyan wuxuu daweeyaa macdanta cayriin ee ay ku jiraan qiyaastii 4% macdanta culus ee qiimayaasha ilaa 1100 Gt / hr. Laga soo bilaabo tan, waxay soo saartaa celcelis ahaan isku-darka xNUMX% macdanta culus oo leh TiO80 soo kabashada 2%. Mashiinka qoyan wuxuu isticmaalaa seddex marxaladood oo ah kuwa buufin kara. Spirals waa jaranjarada helicoid oo lagu hagaajiyay jaranjarada hoos u dhaca waxaana loo habeeyey qaabeynta 78-, 7-, ama 5-Turn. Quudashada kuleylka leh ee ciidda iyo biyaha ah waxaa lagu soo bandhigaa dusha sare ee wareega kasta. Maadama sheyga qulqulaya iyo agagaarka barkadaha dhexdooda, macdanta dab-damiska sida "quartz iyo ciid silica" waxaa loo qaadayaa dhinaca bannaanka webiga. Macdanaha culus, tusaale ahaan, ilmenite, zircon, iyo staurolite, waxay u muuqdaan inay diirada saaraan gudaha lafdhabarta ka dibna waxaa loo jiidayaa goobaha la xushay. Meelaha kala duwan ee uruurinta kala duwan ayaa markaa dib loogu laabanayaa dib u gurasho dheeraad ah ama murgacooyin isku xiga oo isdaba-joogga ah.
Spirals rougher waxay soo saartaa celcelis ahaan isku darka xNUMX-10% macdanta culus. Boogihii dabadheeraadku waxay ku sii daayaan balliga sidii dhabarka dambe. Tan iyo 15% ee quudinta qulqulka ayaa lagu soo celiyey balli-biyoodka, qulqulka iyo balliggu waxay runtii si tartiib tartiib ah ugu socdaan jihada macdanta. Qiyaastii labadii toddobaadba mar, waxaa lagama maarmaan ah in la dhaqaajiyo mashiinka qoyan ee saboolka ah si loogu sii wado hore u socodka qulqulka.
Dhex dhexaadka wareega ee roug ayaa dib loogu warshadeeya madaxa quudinta si loogu caayo rogayaasha. Isugeynta xargaha wareega ayaa loo tuuraa meelaha buufiyuhu ka nadiif yahay. Nadiifiyuhu wuxuu ku socdaa xajmiga culeyska saafiga ah ee loo yaqaan 'finisher spirals'. Ballalkii gogosha qurxinta ayaa mar labaad ku soo noqonaya summada quudinta nadiifiyaha ah ee loogu talagalay dib-ugu-noqoshada. Isku-darka finisher-ka waxaa lagu soo ridayaa dhuumaha 5-ee loo yaqaan 'kayd dhul ah', oo lagu ridayo gawaarida xamuulka ah si loogu geeyo mashiinka qallalan.
Isku-uruurinta qoyan ee qoyan waa isku-dar ah macdanta titanium, silica macdanta culus, iyo quartz. Shaqada mashiinka qalalan ayaa ah inuu soo ceshado macdanta titanium-ka, isla markaana uu u sii kala saaro wax soosaarka aan caadiga ahayn iyo sheyga leucoxene-rutile. Nidaamku wuxuu ka faa'iideysanayaa ku-shaqeynta macdanta 'titanium' ee daaweynta xiisadda sare iyo birlabta sare. Qalabka xoogga qoyan waxaa lagu xoqaa iyadoo la isticmaalayo sodium hydroxide ka hor inta aan la qalajin warshad. Tani waxay ka saareysaa lakabyada dusha sare ee walxaha dabiiciga ah iyo dhoobada. Meelaha hadhuudhka nadiifka ahi waxay hagaajinayaan soo kabashada waxayna u oggolaanayaan wax soo saarka macdanta oo tayo sare leh in la soo saaro. Macdanta la xoqay ayaa lagu qalajiyey qalajiyaha wareega. Macdanta kulul waxaa marka hore lagu kala saaraa kala-saarayaasha xiisadaha kacsan ee adag iyo uruurinta qallafsan waxaa lagu daaweeyaa duubista xiisadaha sare ee nadiifka ah. Ururada nadaafadda ayaa lagu dhaafey magnets-xoog badan, mid kasta oo leh laba banki oo shan rotor ah oo taxanayaal ah. Qaybta magnetic-ka ayaa la soo ururiyaa oo loo raraa sida ilmenite. Badeecadani waxay ka kooban tahay 98% macdanta titanium iyo celcelis ahaan 64% TiO2. Qaybta nonmagnetic-ka waxaa dib loogu celiyaa wareegga nadiifinta ee ugu dambeeya si looga soo kabto leucoxene iyo rutile shixnad. Wax soo saarka ugu dambeeya wuxuu ka kooban yahay 98.5% macdanta titanium-ka wuxuuna falanqeeyaa 80% TiO2. Guud ahaan soo kabashada TiO2 ee miraha qalalan celcelis ahaan 97%.
Dabada aan tooska ahayn ee ka timaadda wareegga xiisadda sare waxaa lagu quudiyaa xoog-weyneyaal xoog badan. Shayga magnetka waa staurolite ganacsi, isagoo tijaabinaya 45-50% Al2O3 iyo 13-15% Fe2O3. Darajooyin kala duwan ayaa la soo saaray si loo helo ciid gaar ah (Biasill®) oo ay keenaan joojinta sandblast (Starblast)®).
Burooyinka magnetka ee loo yaqaan 'staurolite magnet tailings' waxaa ku jira 25-30% zircon, 15-20% aluminium silicate aluminium iyo qiyaastii 50% rubuc. Xaddiga culeyska gaarka u ah ee zircon wuxuu ka dhigaa kala goynta culeyska macdanaha culus ee culus ee suurta galka ah iyadoo la adeegsanayo lafdhabarta. Isku-darka aagga zircon waa qallajiyaa oo dib u habeeya hanaan loo qaabeeyey ka dib markii birta qallalan ee macdanta birta ah.
Toonno waaweyn oo zircon ah ayaa loo adeegsadaa wasakhda ciidda warshadaha aasaasiga ah. Qaddar yar ayaa loo adeegsadaa soo saarista warshadaha wax lagu shubo, warshadaha dhoobada dhoobada ah, biraha zirconium, iyo kiimikooyinka. Darajooyin kaladuwan ayaa la soo saaray shuruudaha tayada tayada kulanka ee adeegsiga dhamaadka.
Tijaabooyinka dhir beerista ayaa ka bilaabmay dabada miinada sanadkii 1952. Sanadihii la soo dhaafay, noocyo badan oo caws iyo geedo ah, oo ay weheliyaan bacriminno, ayaa lagu dabaqay xoogaa guul ah. Hal doog, oo leh magac aan caadi ahayn oo ah "Caws jacayl oohin Afrikaan ah," ayaa laga keenay aag leh xaalado deegaan oo la mid ah. Cawska jacaylku wuxuu gaadhay koritaan dhexdhexaad ah wuxuuna gacan ka gaystay xasilinta dabo si geedaha geedka geedku u noolaan karaan.
Horraantii 1969, si kastaba ha noqotee, dib-u-soo-qaadistu waxay qaadatay jiho cusub. Halkii laga beeri lahaa doogga cusub si toos ah dusha, dusha sare ayaa laga saarayaa ka hor qodista waxaana loo isticmaalaa in lagu daboolo dabada. Cawska daaqa ayaa markaa la beeray isla markaana koritaanka si dhakhso leh ayaa loo aasaasay. Kadib bacrinta iyo xasilinta carrada oo kufilan, geedaha firidhsan ayaa dib loo dhisay. Barnaamijkan dib-u-soo-celinta ayaa loo tixraacay inuu tusaale u yahay warshadaha macdanta ee Florida.
Inta lagu guda jiro hawlgalka macdanta, humate ka soo ciidda waxaa lagu sii daayay ganaax kolloidol ah ee balli dredge balliga. Humate waa qayb dabiiciyan ah oo dabiici ah, midab madow oo midabkeedu mugdi yahay, waana wax ku baahsan Florida oo dhan. Waxaa si gaar ah looga ogaan karaa Florida "hardpan" outcroppings.
Inta lagu dhex wareegayo jirka biraha, waxaa lagama maarmaan noqota in la habeeyo heerka barkadaha qulqulaya waqtiyada qaarkood si loogu oggolaado in qulqulka biyuhu uu gaaro meel dhaadheer ama mararka qaar qoto dheer Dhammaan barkadaha biyuhu soo ridayaan iyo biyo daadadku ka baxaan ayaa la soo ururiyaa oo loo dejiyaa taxane tas-hiilaadka daaweynta ka hor inta aan la siinin durdurrada dadweynaha.
Sulfuric acid (H2SO4) waxaa lagu daraa biyaha si hoos loogu dhigo pH illaa 3.5. Talaabadani waxay kadhigaysaa inay ku soo biiraan arimaha dabiiciga ah waxayna ka dhigayaan awood cad, oo laga diido balliyada. Biyaha saafiga ah ayaa markaa lagu goynayaa pH 7 oo liin ah oo loo sii daayaa durdurrada dadweynaha.